Somalia: Mareykanka oo ka hadlay hogaamiye laga dilay Daacish – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliska Mareykanka ee Qaarada Afrika ee loo yaqaano (Africom) ayaa faah faahin ka bixiyey duqeyn dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Bari taas oo ay la beegsadeen Xubno ka tirsan Daacish-ta Soomaaliya.
Qoraal kasoo baxay Taliska Mareykanka ee Qaarada Afrika ayaa lagu sheegay in 14-kii Bishaan duqeyn dhinaca cirka ah ay la beegsadeen gaari uu sarnaa hoggaamiye kuxigeenkii labaad ee Daacish-ta Soomaaliya Cabdi Xakiin Dhoqob xilli ay marayeen deegaanka Xiriiro ee Gobolka Bari,isla markaana weerarkaas ay ku dileen.
Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in Cabdi Xakiin Dhoqob uu ahaa Sarkaalka Daacish ee soo abaabula weerarada ka dhaca deegaanada Puntland,sidoo kale uu ka qeyb qaato xaalufinta waxyaabaha Kheyraadka ah ee laga helo deegaanada Puntland sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale duqeyntaas ayaa Mareykanku sheegay in lagu burburiyey Gaariga uu saarnaa Cabdi Xakiin Dhoqob, balse ay baaritaan ku sameynayaan in dad rayid ah ay wax ku noqdeen.
MD Farmaajo oo fariin u diray Booliska (AKHRISO)